“U soo bixitaanka Champions League waa guul ay gaartay Chelsea” – Lampard – Gool FM
“U soo bixitaanka Champions League waa guul ay gaartay Chelsea” – Lampard
Dajiye August 21, 2020
(London) 21 Agoosto 2020.Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay in u soo bixitaanka Blues ee tartanka Champions League ay tahay guul weyn ay gaartay kooxda reer London.
Kooxda London ayaa u soo baxday tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda, kaddib markii ay ku dhameysteen kaalinta afaraad ee miiska kala sareynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2019/20.
Shabakada caalimaha ah “Goal” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Frank Lampard, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marka aad lumiso ciyaaryahan saameyn leh sida Hazard, waxaan ogaynay inay ciyaartoydu mararka qaar ku tiirsan yihiin daqiiqadihiisa sixirka ah si ay guul noo siiso kulamada”.
“Waan fahamsanahay sababta dhaleeceyeyaasha qaar aysan noo siinaynin fursad ah inaan ku jirno afarta sare ee horyaalka Premier League”.
“Marka aad heysato ciyaartoy ka soo laabtay amaah, mararka qaar waxaa jiri doona waqtiyo adag, balse inaad ilaashato fursada u soo bixitaanka Champions League waxa ay aheyd guul weyn oo ay kooxda gaartay”.
“Kaalinta afraad waxay ahayd guusha sanadkan, laakiin ma doonayo inaan sidaas iraahdo sanadka soo socda”.
“Aan maalin walba ka shaqeyno sidii aan horumar ku sameyn lahayn, isla markaana aan ku soo yareyn laheyn farqiga kuwa naga sarreeya, oo aan helno waxyaabo badan oo aan wadi karno, waxyaabo badan oo sanadkaan ah ayaa na siinaya sabab aan ku rumeyn karno, Waxaan hayaa fikrad aad u cad meesha aan u arko in loo baahan yahay in horumar laga sameeyo”.
Waa kee ciyaaryahanka uu doonayo inuu Macallin Ronald Koeman ka dhigto saxiixiisa ugu horreeya ee Kooxda Barcelona?
Maxay tahay fariinta uu Willian u diray kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang?